16-oghere AKW -KWỌ-AKWUNTKWỌ AKW FKWỌ AKW OKWỌ AKW ,KWỌ, Dual power supply, 19 "2U elu, isi-FX isi-TX, China 16-Ohere nkwanye-Ugwu FIBER OPTIC TRANSCEIVER, Dual ike ọkọnọ, 19" 2U elu, isi-FX isi -TX Manufacturers, Suppliers, Factory - Qingdao etinyere teknụzụ photonic co., Ltd.
Eriri Optic Coupler Series
Ngwa anya transceivers Series
Optical Fiber Gbanye
Ihe nyocha / Optimator Series
FC fiber optic njikọ
SC eriri optic njikọ
LC eriri optic njikọ
ST eriri optic njikọ
Njikọ MU fiber optic
E2000 eriri optic njikọ
Isi ọdụ USB
Ngwa anya modul Series
Ngwa anya Splice Series
Eriri Ngwa anya 86-ụdị Panel Box
Embeded SC Ndenye njikọ
Optical Fiber Nkesa Box
Optical mgba ọkụ-1X1
Optical mgba ọkụ-1X2
Optical mgba ọkụ-2X2
>lọ>Product>Ngwa anya transceivers Series>Ngwa anya transceivers Series > Nkọwa zuru ezu
16-oghere AKANKỌ-EGO FIBER OPTIC TRANSCEIVER, Dual power supply, 19 ”2U elu, isi-FX isi-TX
Ihe nkedo 16-rack-mount fiber optic transceiver bu ihe ntinye ihe omimi nke di omimi nke nwere ike itinye aka na 16 10 / 100M na-agbanwe agbanwe ma obu 1000M fiber optic transceivers (tinye ya na transceivers ike ike desktọọpụ anyi) A na-agbanwe kaadi ya ma tinye ya na etiti. na otu ogbe maka ike edo edo. Nke a abụghị naanị na-ebelata akara njikọ, na-eme ka usoro ahụ dị mfe, mana ọ na-emekwa ka njikwa na ndozi dị mfe.
Ebe Ahịa Ahịa
1. Ogwe a na-akwado swapping na-ekpo ọkụ, enwere ike ịkwado ya site na otu ma ọ bụ ike ọkụ abụọ. Mgbe a na-eji ike ọkụ abụọ eme ihe, a ga-agbanye ike ọkụ abụọ n'otu oge, na-ebelata ibu na ike ọ bụla ma gbatịa ndụ ọrụ nke ike ọkọnọ. Mgbe otu ike ọkọnọ na-ada, a na-enye ike ọzọ na-enye ike, nke mere na ọrụ transceiver anaghị akwụsị.
2. Ọ dịghị mkpa iwepu eriri transceiver mgbe ị na-arụzi ma dochie ike ọkọnọ, ọ dịghịkwa mkpa iwepu ogbe ahụ na kabinet. Nanị wepu ikike ọkọnọ na-ezighi ezi site na azụ nke ogbe maka ịrụzi ma ọ bụ dochie anya, nke na-eme ka mmezi dị oke mma. Ngwa ngwa. Ya mere, ọ nwere ike ịnye ntụkwasị obi dị elu, ikike dị elu, njikọta ọnụ, arụmọrụ dị elu na akụ na ụba fiber optic network center maka usoro eriri Ethernet fiber-optic, ma nwee atụmatụ dị ịrịba ama dịka ịrụ ọrụ kwụsiri ike, nnukwu ikike ịnye ike , ọrụ dị mma, na ndozi dị mfe.
1) Eriri ka ulo oru ngo
2) USB network TV
3) Sistemụ ikuku ikuku na-agafe agafe
4) Netwọk mpaghara mpaghara
5) Sistemụ spectroscopic ndị ọzọ
Q1. Enwere m ike ịnweta usoro ihe nlele maka ngwaahịa a?
A: Ee, anyị na-anabata usoro ntụle iji nwaa ma chọpụta mma. A nabatara ihe atụ ndị a kwadoro.
Q2. Kedu maka oge ndu?
A: Sample kwesịrị ụbọchị 1-2, oge imepụta oke chọrọ izu 1-2.
Q3. Kedu ka ị ga - esi ebu ụgbọ na ole ole ka ọ ga - ewe?
A: Anyị na-ebu ụgbọ mmiri site na DHL, UPS, FedEx ma ọ bụ TNT. Ọ na-ewe ụbọchị 3-5 ka ọ bịarute. Ụgbọ njem ụgbọ mmiri na ụgbọ mmiri na-ahọrọkwa nhọrọ.
Q4: Ị na-enye nkwa maka ngwaahịa?
A: Ee, anyị na-enye afọ 1-2 akwụkwọ ikike maka ngwaahịa anyị.
Q5: Gini banyere oge nnyefe ??
A: 1) Ihe nlele: n'ime otu izu. 2) ngwongwo: 15-20 ụbọchị na-emekarị.
Nke 47 Tokyo Road, Free TradeZone, Qingdao, Shandong, China